Indlu ngasemlanjeni ***
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNina
Indlu encinci yelali emi ecaleni komlambo ozolileyo inika indawo ebanzi kunye nenoxolo.
Ilali le ndlu imi kuyo ikufuphi neZgornje Gorje, kufutshane neBled. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu ukusuka eBled ukuya ePokljuka, kukukhokelela kwilali enobuhlobo, encinci kwaye izolile, ke iyaphumla kwaye izolile nakwelona xesha lixakekileyo lonyaka.
Nceda uqaphele ukuba isitalato esikhokelela kwindlu sincinci - i-1.75 cm ububanzi kunye nokuphakama okulinganiselwe kwi-240 cm.
Indlu ifumaneka kwimigangatho emibini eyahlukeneyo. Kumgangatho ophantsi kukho amagumbi aqhelekileyo. Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi okulala amathathu ahlukeneyo, kunye negumbi lokuhlambela.
Igumbi lokuhlala lixhotyiswe ngezitulo ezitofotofo kunye neesofa ezimbini ezipholileyo. Kwikona yegumbi lokuhlala, unokujonga ngefestile enika umbono womlambo. Unedesika eyahlukileyo yokufunda, umsebenzi wekhompyutheni, ... Kwigumbi elifanayo, kodwa lihlukaniswe, ligumbi lokudlela.
Ikhitshi libonelela ngezinto ezininzi ezifana nemicrowave, itoaster, isitovu esineoveni, iketile, nazo zonke ezinye izixhobo eziyimfuneko kwisidlo sosapho.
Ecaleni kwekhitshi kukho igumbi lokuhlambela, elibandakanya ukuhlamba kunye noomatshini bokuhlamba.
Kumgangatho wesibini, kukho amagumbi okulala amathathu apholileyo kunye negumbi lokuhlambela lesibini. Kwigumbi lokulala lokuqala, kukho iibhedi ezintathu ezingatshatanga 90x200cm. Igumbi lokulala lesibini losapho linamagumbi amabini ahlukeneyo. Ngalinye kula magumbi lineebhedi ezimbini ezilinganayo. Igumbi elinye linamabini adityanisiweyo angama-90x200cm, kwaye elinye linee-singles ezimbini ezahluliweyo eziyi-80x200cm.
Igumbi lokulala lesithathu lineebhedi ezimbini ezinobukhulu obunye obuyi-90x200cm ezidityaniswe kunye.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Le ndlu ikwilali encinci kufutshane neBled, enenye yezona ndawo zityelelwa kakhulu ngabakhenkethi eSlovenia.
Ukuhamba ngemizuzu emihlanu ukusuka eBled kukukhokelela ePokljuka. Ngaphambi kokuba unyukele ePokljuka, indlela ikukhokelela kude nomgwaqo omkhulu ukuya kwidolophana. Ilali inezitalato ezimxinwa kakhulu kwaye ubude bulinganiselwe.
Kufuphi nendlu, ngaphandle kwePokljuka elungele ukuhamba intaba kunye nokukhwela ibhayisekile, ikwayiVintgar Gorge. ILake Bohinj ikwimizuzu engama-40 kude.
Ngexesha lasebusika, ngaphakathi kwe-radius ye-1-hour drive, uneendawo ezintathu zokungcebeleka kwe-skiing: i-Kranjska Gora, i-Krvavec, i-Vogel.
Siyafumaneka kwiindwendwe zethu 24/7 ngezicelo zakho kunye nongxamiseko.